အမှု၌သင်တို့ငွေထုတ်စက်အသုံးပြုချင်ကြဘူး, တမြို့အတွင်းအမျိုးမျိုးသောအစက်အပြောက်မှာပိုက်ဆံဖလှယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ရောမမြို့ Termini အနီးအများအပြားလဲလှယ်အချက်များရှိပါသည်, ရောမမြို့ရဲ့အဓိကမီးရထားဘူတာရုံ. သို့သျောလညျး, ကျနော်တို့ CASA del Turista အကြံပြု, ဘူတာကနေအတိုလမ်းလျှောက်ရာဖြစ်ပါသည်.
မီလန်အတွက်ခရီးသွားဧည့်ဖွယ်ရှိသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့် မီလန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, အကောင်းတစ်ဦးကငွေလဲလှယ်အချက်အရာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Piazza del Duomo မှာလဲလှယ်ရှာဖွေပါ, ရုံမိနစ်ကွာဘုရားကျောင်းမှာကနေ. ဒါဟာအစခရီးသွားများအတွက်စစ်ဆေးမှုများလက်ခံ, သူတို့ကိုသင်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပျက်လျှင်.
ပဲရစ်စိတ်ဝင်စားဖို့ငှလေဲရှိပါတယျ, အဘယ်သူကိုအချို့ရာစုနှစ်တစ်ခုအဘို့အလှည့်ပတ်ပြီ. သင်ကမြို့ထိပ်ကဆွဲဆောင်မှုတဦးနှင့်နီးစပ်သူသူတို့ထဲကအတော်များများရှာတှေ့နိုငျ - Arc de Triomphe. ကျနော်တို့အကြံပြုတ APS ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါသည်, တွင် 30 ရိပ်သာက de Friedland.
သင်တို့သည်ငါတို့၏အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါလျှင်ဘရပ်ဆဲလ်မှာအကောင်းဆုံးပိုက်ဆံလဲလှယ်အစက်အပြောက်ရှာဖွေခြင်းရှည်လျားလွန်းသငျသညျမယူသင့်တယ်. သင်တစ်ဦးငွေကြေးကိုလဲလှယ်အသက်ရှင်သောနှစ်လယ်ပိုင်းစျေးကွက်နှုန်းကနှိုင်းယှဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောနှုန်းကိုစစျဆေးနိုငျ. သို့သျောလညျး, အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာ Boulevard အဒေါ့ဖ်မက်စ်မှာ DME ပြောင်းလဲခြင်းဦးမယ် 11.
နယ်သာလန်နိုင်ငံဘဏ်များပုံမှန်အားဖြင့်သာမိမိတို့၏ဖောက်သည်ကငွေလဲလှယ်န်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်, ခရီးသွားဧည့်များအတွက်အဆင်မပြေရာဖြစ်ပါသည်. ဘယ်အချိန်မှာအမ်စတာဒမ်အတွက်, အဆိုပါ Damrak Avenue အပေါ်ပြောင်းလဲမှုရုံးများရှာ. လူကြိုက်အများဆုံးတဦးတည်း Pott ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါသည်, သင်မြို့အနီးကိုရှာဖွေနိုင်သည့် တော်ဝင်နန်းတော်.
သငျသညျဗီယင်နာအတွက်ယူရိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. လေဆိပ်နှင့်ခရီးသွားဧည့်အစက်အပြောက်ပိုက်ဆံလဲလှယ်အစက်အပြောက်များအတွက်အလုံခြုံဆုံးရွေးချယ်မှုများဖြစ်ကြသည်. သို့သျောလညျး, ကျနော်တို့အကြံပြုအရပ်တပါး Interchange ဖြစ်ပါသည်, စိန့်ဆန့်ကျင်ဘက်. မြေအောက်ရထားဘူတာရုံမှအနီးကပ် Stephens ဘုရားရှိခိုးကျောင်း. သူတို့ကအစခရီးသွားများအတွက်စစ်ဆေးမှုများကိုလက်ခံ, အရာသူတို့ကိုသင်ရှိပါကအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ထိပ်တန်း 10 ဥရောပမှာတော့ပိုက်ဆံအိတ်ချိန်းအချက်များ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/money-exchange-points-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#currencyexchange #moneyexchange #traveleurope ငွေကွေး traveltips